Voalaza Fa Noraràn’i Rosia ny Linkedin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2016 6:17 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, বাংলা, Français, Swahili, English, عربي, Български, 简体中文, 繁體中文, Ελληνικά, English
Ny fiafaran'ny LinkedIn ao Rosia?
Atahorana ho voaràra ao Rosia ny LinkedIn, tambajotra arak'asa antserasera lehibe indrindra manerantany, satria nandresy lahatra ny fitsarana Moskoa mba handràra ny tambajotra ireo mpanao sivana federaly.
Nahita ny mpitsara fa mizara tsy ara-dalàna ny mombamomba manokan'ny “tsy mpiserasera” tsy nahazoana alalana ny LinkedIn. Amin'izay mety hisy vokany ratsy kokoa, nilaza ihany koa ny fitsarana Moskoa fa manangona ny mombamomba manokan'ny mpiserasera ao Rosia tsy mitahiry ny antontan-kevitra ao amin'ny lohamilina ao Rosia ny LinkedIn – fepetra ara-dalàna nampidirina tamin'ny herintaona izay vitsy ireo orinasan'ny aterineto vahiny manaja azy.
Araka ny filazan'ny gazety Kommersant, nanapa-kevitra hitory ny Linkedln ireo mpanao sivana federaly taorian'ny fiporitsahana tahirin'ny mpiserasera imbetsaka. Tany am-piandohan'ity taona ity, voalaza fa very famantarana kaonty miisa 167 tapitrisa ny orinasa tamin'ny famoahana an-tsokosoko ny tahiry tamin'ny 2012 – mihoatra lavitry ny kaonty 6,5 tapitrisa noeritreretina tany am-boalohany izany.
Nilaza ireo mpanao sivana federaly fa nitodika tany amin'ny fitsarana satria tsy manana solontena ofisialy ao Rosia ny LinkedIn. Manana mpiserasera voasoratra anarana eo amin'ny 5 tapitrisa eo ny tambajotra ao Rosia (tokony ho antsasak'izy ireo no heverina fa mavitrika) ary mpiserasera 400 tapitrisa manerantany.
Tamin'ny fitorian'izy ireo, toa nanambara ireo Rosiana mpanao sivana fa manangona sy mamindra ireo tahirin'ny olom-pirenena Rosiana ny LinkedIn, anisan'izany ireo Rosiana tsy mpikambana ao amin'ny tranonkala, ary fanitsakitsahana ireo lalàna maro momba ny fiainana manokana izany. Nanapa-kevitra nanohana ny fanjakana ny fitsarana tamin'ny 4 Aogositra, nandidy ny polisy mba handray fepetra hametra ny fidirana ao amin'ny LinkedIn manerana ny firenena.
Tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra, mbola azo nidiran'ny ankamaroan'ny mpiserasera aterineto ao Rosia ny LinkedIn.